Isitshalo se-Ornamental sikhula | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Isitshalo se-Ornamental sikhula
Ukugcina udonga endaweni kanye nomthambeko ngezandla zakhe
Kungaba nesimo esithakazelisayo sokwenza isinqumo - ukuthi yini ongayithola ekuhlelweni kwendlu ehlobo: i-cottage ehle kakhulu noma ehlelekile ehlobo. Ikhetho lokuqala liyazijwayele futhi lilula. Ukhetho lwesibili lungabizi ekusebenzeni, ngoba izindawo ezinendawo engavamile azibaluleka kakhulu phakathi kwezakhamuzi zasehlobo zonyaka, ezesaba ubunzima obukhona.
Ukutshala u-Tui nokumnakekela kahle
UThuja ungomndeni we-cypress. Lesi sihlahla esivuthiwe (noma shrub), esinomqhele obukhulu, sizohlobisa noma yiliphi ipulazi lasekhaya, indawo yasemadolobheni, igceke lomuzi, njll. Ngaphandle komqhele ohlaza okwesibhakabhaka, i-thuja izokujabulisa ngephunga layo, ngoba izinkuni zalo ziqukethe amafutha abalulekile.
Indlela yokunakekela ama-peonies, amathiphu
Ubuhle be-peonies obuqhakaza bubonakalisa ukuthi akunakwenzeka ngempela ukuqeda. Ukuhlukahluka kombala nokwakheka: umuntu angathola kokubili amaqabunga amhlophe anemibala emhlophe e-snow-white noma i-maroon e-anemone, kanye ne-pink terry ne-red-like-like. Ngokuba ama-peonies azama njalo ukuthatha indawo enhle engadini.
Incazelo kanye nezindlela zokulawula izinambuzane zokubulala izinambuzane
Izifo ze-roses nokubonakala kwezinambuzane ezitshalweni zithinta kakhulu izakhiwo ezihlobisa izimbali, kanti kwezinye izimo zingabangela ukufa okuphelele kwesitshalo. Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi ngezindlela ezikhona zokuvikela ama-roses ezinambuzane. Indlela yokubhekana nezimbungu Amacimbi angase ahlasele ama-rose asehlathini akhula emthunzini.
Ukuhlwanyela nini futhi kanjani ukutshala i-berden, imithetho yokunakekelwa kwembali
Kulesi sihloko sizokutshela ngesitshalo esinjalo njengeBadan. Uzofunda ukuthi imbali ye-Badan imele, futhi uthole ulwazi lokutshala nokulinakekela ensimini evulekile. Futhi, ngeke sizinakekele izici zokukhiqizwa kwesitshalo esicacisiwe, imithetho yokunisela nokuyikhathalela. Uyazi?
Izinhlobo eziyinhloko zebergenia nencazelo yazo
I-Badan iyinhlobo yezitshalo ezihlala zitshalo ezivuthiwe ze-kamnelomkovye yomndeni. Igama lesiLatini iBergenia lanikezwa ngokuhlonishwa kukaKarl Augusta von Bergen - isitshalo sezitshalo saseJalimane, uprofesa eYunivesithi yaseViadrin, owahlukanisa i-bergenia ehlukile. Igama elidumile yi-Badyan. Ukubambisana kwalolu hlobo lwesitshalo emndenini wezitshalo ze-stoneing sawing kakade kubonisa ukuthi intaba iyindawo yokuzalwa yaseBergenia.
Ubukhulu obuningi bezinhlobo zama pions, siyaqonda ndawonye
I-Peony iyimbali evumayo ejabulisa amehlo ethu kusukela ngoMeyi kuze kube sekupheleni kukaJune. Izwe lakubo yizindawo ezingaphansi komhlaba eNyakatho Melika nase-Eurasia. I-Peony yohlobo iqukethe izinhlobo ezingu-34, ezihlukaniswe zibe izinhlobo ezingu-5 000. Ngesikhathi esifanayo, izinkulungwane ezingu-4 500 yizinhlanzi ezinotshani zama-peonies nezinhlobo ezingu-500 nje kuphela ezifana nomuthi. Uyazi?
I-lace ebukhoma embhedeni wembali, indlela yokukhulisa i-delphinium kusayithi lakho
I-delphinium noma i-bog ingeza kakhulu engadini yakho. Abasimili bamane bamthanda. Ama-inflorescence amakhandlela aphezulu ngaphezu kwazo zonke izinhlobo zezilwane, enikeza ubuhle bensimu nokuhlanzwa. Izimbali ze-delphinium zibekezelela ngokubili isomiso nesithwathwa. Amafomu e-Terry amafomu athakazelisayo nama-shades ngeke akhiphe isithukuthezi engadini yakho.
Izinhlobo ezingcono kakhulu ze-delphinium ngencazelo
I-Delphinium inegama layo ngenxa yesimo esingavamile sezimbali, esikude sifana namadonphin amaningi ashayela ndawonye. I-Inflorescences, efinyelela ngamamitha amabili ukuphakama, nge-shades ehlukene, ungashiyi noma ubani ongenandaba nalabo abake babona ama-flowerbeds nama-delphiniums. Uyazi? Elinye igama le-delphinium yi-spur.
Yiziphi izici ezifanele ukukhula emadolobheni
I-Clematis isitshalo esizobukeka sikhulu kunoma yikuphi ukubunjwa kwensimu. Kuyinto engahlonipheki futhi engenamakhaza. Lezi zitshalo zihle kakhulu futhi ziyaqhakaza kusukela ngoJuni kuya kuSeptemba, ezingenakujabulela kuphela abalimi. Izindinganiso zethu zifanelekile ezinhlobonhlobo zezinhlobo zawo, kodwa kungcono ukutshala i-clematis esifundeni saseMoscow, sizokutshela ngokuqhubekayo.
Indlela yokutshala i-lily, ikakhulukazi ukunakekelwa ensimini
U-Lily uyimbali enhle kakhulu ye-genre Liliaceae, ehlanganisa amakhambi ahlala njalo avela kuma-bulb. U-Lily udume ngembala ehlukahlukene, iphunga elimnandi kanye namafomu avelele. Uyazi? ULily uyimbali evulekile. Ukuze libonise wonke umusa wayo nobuhle, limele likhule engadini.
Khohlwa-hhayi: izinhlobo, ukufika nokukhathalela
Izinhlobo kanye nencazelo yokukhohlwa-Angazi Ukukhohlwa-hhayi (Myosotis) - uhlobo lwezitshalo ezivela emndenini we-borage (i-Boraginaceae). Khohlwa-hhayi-amude, usayizi omncane futhi ngezimbali ezincane ezinhle. Le nhlobo iningi futhi inezinhlobo ezingaba ngu-50 zezitshalo. Izimbali zithandwa kakhulu futhi zande kangangokuba zitholakala cishe kuwo wonke umhlaba, kusukela eYurophu kuya eNingizimu Afrika.
Iyini i-beran ezuzisayo, izakhiwo zokuphulukisa zezitshalo
I-saxifrage, i-flower yokuqala, i-bergenia, itiye laseMongolia, i-chai ye-Chagir, i-beran nayo yonke amagama esitshalo esisodwa. Ifinyelela ukuphakama kwama-30-70 cm futhi ikhetha izindawo ezivaliwe kusuka emoyeni; ingakhula ngaphansi kweqhwa elincane. Ungamhlangabeza eSiberia, eChina naseMongolia. Isihlahla saseBergenia sivame ukusetshenziswa emithi yokwelapha, njengoba izindawo zayo zokuphulukisa zingakwazi ukubhekana nezinombolo zezifo ezihlukahlukene.
Ukuthutha kwe-autumn tulips
I-tulips ingenye yezimbali ezidume kakhulu phakathi kwabalimi. Zitholakala cishe yonke imibhede nezitidi. I-Tulip ihlukaniswa nobuhle bayo nokunakekelwa okungenakuzithoba. Kufanele kuqaphele ukuthi ukutshala ama-tulips emhlabathini ekwindla kuyinkimbinkimbi encane. Ukwethula i-tulip kukujabulise ngobuhle bayo, udinga ukwazi ukuthi ungayitshala kanjani kahle.
Izimfihlo zamabhentshi athakazelisayo
I-Bellflower (lat. Campánula) iyinhlobo yezitshalo ezivame kakhulu ezivela emndenini waseBellflower. Umndeni uhlanganisa izinhlobo ezingaphezu kwezingamakhulu amane ezikhulayo kumazwe anesimo sezulu esiphezulu. Insimbi ikhula eCaucasus, eSiberia, e-Asia, eYurophu naseNyakatho Melika. Inqwaba yefomu yemvelo ngenempumelelo enkulu itshalwa ngabantu emasimini, njengoba kuhlobisa, kubusika-okuqinile futhi kunalokho kungakhulumi kahle ekunakekeleni.
UDahlia - imbali enhle ekwindla
Akusizi ngalutho ukuthi abalimi balithanda ukutshala ama-dahlias emakhazeni, ngoba lezi zimbali zinenani elingenakulinganiswa lezinhlobonhlobo. Izinhlobo ezahlukene ze-dahlias ziyahlukahluka kumingcele eminingi: ukuphakama kwesitshalo, ubukhulu nokuma kwe-efihlekile, ilungiselelo lamagundane, izimo zokukhula nokunakekela, nombala webala. Okuncane mayelana nemibala ekwindla Igama lesibili lembali nguDahlia, kokubili amagama anikezwa ngamagama ama-botanists: I.
I-Silver Cineraria: ukutshala nokukhathalela
I-Cineraria ingokomndeni wakwa-Astrov, uhlobo lwe-Krestovnik. Kunezinhlobo eziningi ze-cineraria, futhi zonke zihlukile komunye nomunye ngokubukeka. Kukhona izimbali ezinomsoco, izihlahla zemihlobiso. Zonke lezi zinhlobonhlobo zinomumo ohlukile, umbala nosayizi. Izinhlobo ezidume kakhulu ze-cineraria ziyi-cineraria enhle kakhulu, i-cineraria enegazi kanye nesi-cineraria yesiliva.
Amathiphu okutshala nokunakekela i-primrose
I-Primula - imbali evela emndenini wama-primroses. Lesi isitshalo esingapheli, esiqhakaza ekuqaleni kwentwasahlobo. Izinhlobo ezingaphezu kuka-500 zama-primroses aziwa ukuthi zivame ezindaweni ezihlukahlukene: amahlathi, emathafeni, ezindaweni ezisezintabeni, isimo esiyinhloko sokusabalalisa inhlabathi enomhlabathi ecebile. Izinhlobonhlobo ezidumile ze-primrose zisetshenziswa. Emasimini, izinhlobo ze-hybridi zivame ukukhula, ngezinye izikhathi zikhula.
Ukukhula kwama-laurels ekhaya
Abalimi baseLavateru bathanda ukulula. Ayesabi imimoya nokubandayo, ibekezelela kahle ilanga elinamandla, isomiso. Futhi uma uhlinzeka ngemibandela evamile yokukhula, ingazandisa yedwa. Izinhlobo ezinhlobonhlobo nezinhlobonhlobo zama-laureates Isitshalo se-ornamental sinezinhlobonhlobo ezinhlobonhlobo ezinikezwe.
Izici ze-roses ezikhulayo, indlela yokukhulisa i-rose kusuka ebhodini
Rose uyindlovukazi yezimbali. Izimbali ezimnandi ngephunga elithambile kakhulu - indlela enhle yokuzijabulisa wena noma othandekayo. I-rose ehluma ensimini ngeke ilahlekelwe ubuhle bayo kanye nokuyinkimbinkimbi phakathi kwezinye izimbali. Yena, njengesibonakaliso sothando, ubukhulu nobubele, uzokugqugquzela empumelelo. Ngokuvamile ungathanda ukukhulisa i-rose kusuka ezihlokweni ezinikezwe zona izihlobo, izihlobo, abangane, kodwa kungakhathaliseki ukuthi uzama kanjani, ama-cuttings akho ayamukelekile futhi ayomile noma kunjalo.
Ukutshalwa kwezobuchwepheshe kanye nokunakekelwa kwe-surfinia
Ngokuvamile emabhaleni, ezindaweni zasemasimini nasezindaweni zasemadolobheni ungathola izimbali ezithakazelisayo - njenge-petunia, kodwa hhayi i-petunia. Ngakho-ke, lolu uhlobo lwe-petunia - iSurfinia. I-Surfinia iyi-hybrid ye-ampelous petunia, eyabanjwa ngababelethi baseJapane eminyakeni engamashumi amabili edlule. Zihlukaniswa yimifino eluhlaza, amahlumela amade futhi agcina ukuhlobisa ngisho nangemva kwemvula.
Utamatisi we-Supermodel enhle futhi enhle: incazelo ehlukahlukene, isithombe
Amazambane ahlukahlukene "Melody": izici, izimfihlo zokulima okuphumelelayo
Abathandekayo yizitamatisi eziningi namakhukhamba - kungenzeka yini ukubahlanye ndawonye? Ama-gardeners amathiphu
UViolet Raisins - incazelo nezimpawu zezinhlobonhlobo
I-autumn apula izihlahla ngokuningiliziwe
I-Stapelia - ukunakekelwa kwasekhaya, izinhlobo zezithombe nezinhlobonhlobo
I-Bloodroot - imifino ephulukisa ngezimbali ezintekenteke